दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको सामुहिक अन्त्येष्टी – Gulmiews
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको सामुहिक अन्त्येष्टी
२१ आश्विन २०७२, बिहीबार ००:४६ Sanju Kauchha
गुल्मी १९ असोज, सोमवार दिउसो तम्घास नजिकै उर्लेनीमा भएको बस दुर्घटनाका मृतकहरुको सामुहिक अन्त्येष्टी गरिएको छ । मृतक ५ जना सबैको धार्मिक स्थल रिडीको कालिगण्डकी किनारमा मगंलवार दिउसो अन्त्येष्टी गरिएको हो ।
सोमवार बिहान बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास तर्फ आउदै गरेको लु १ ख ४१६१ नम्बरको बस सदरमुकाम तम्घास नजिकै रेसुङ्गा नगरपालिका उर्लेनीमा दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा रेसुङ्गा नगरपालिका ६ का ४५ बर्षिय रोहित मरासिनी, रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नं. ८ का ३३ वर्षका करण चुदारा, रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नं. १५ की ५० वर्षिय भिम कुमारी श्रीस रेसुङ्गा नगरपालिका १५ कै ताम बहादुर सुनार र अलाङ्गकोट ६ की ५ बर्षिय सिजन परियारको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीले मृतक ५ जनाको जिल्ला अस्पताल तम्घासमा मगंलवार बिहान पोष्टमार्टम गरी सबै शब आफन्तलाई जिम्मा लगाएपछि सबैको धार्मिक स्थल रिडीको कालीगण्डकी किनारमा अन्त्येष्टि गरिएको हो । अन्त्येष्टिका लागि जिल्ला स्थित बिभिन्न राजनितीक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, समाजसेवी, ब्यापारी, सर्वसाधारण, आफन्त लगायत सयौंको सख्यामा मगंलवार दिउसो रिडीमा उपस्थिती रहेको थियो । दुर्घटनामा दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाईतेहरु मध्ये अधिकाशंको पाल्पामा उपचार भैरहेको छ भने केही जिल्ला अस्पताल तम्घासमा सामान्य उपचार गरि घर फर्किसकेका छन । गम्भिर घाईतेहरु अधिकाशंको टाउको र छातीमा चोट लागेको छ ।
बस सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटना स्थल सदरमुकाम तम्घासबाट ७ किलोमिटरको दुरीमा रहेको पर्दछ । सदरमुकाम नजिकै भएको बस दुर्घटनामा जिल्लाका ५ जनाले ज्यान गुमाएकाले जिल्लावासीहरु शोकमा डुवेका छन । मृत्क मध्ये ४ जना रेसुङ्गा नगरपालिका वासी रहेका छन । दुर्घटनामा घाईतेहरुको बयान अनुसार बस तिब्र गतिका कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ ।